ပရိတ်သတ်တွေကြား ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်တတ်နေတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီရန်အောင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားများ – Cele Lover
ပရိတ်သတ်တွေကြား ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်တတ်နေတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီရန်အောင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားများ
ပရိတ်သတ်တွေကြား ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်တတ်နေတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီရန်အောင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားမျာ
အကယ်ဒမီဆုများရှင်ရန်အောင်ကတော့ အနုပညာရှင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ မသိသူမရှိရအောင် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်အောင်ကတော့ လူကြီးလူငယ်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတိုင်းကို အားပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားရန်အောင်ကတော့ အနုပညာဝမ်းစာပြည့်ဝသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဟာသပိုင်းမှာလည်း ကျွမ်းကျင်သလိုဒရမ်မာပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေငိုရလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ရန်အောင်က ဟာသပိုင်းတွေကိုပိုပြီးအားသန်လာတာကြောင့် ကလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲလည်း ဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ်။ မင်းသားရန်အောင်က အပေါင်းအသင်းလည်းပြေပြစ်သူဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း ချစ်ခင်သူတွေပေါများပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း အချစ်ပိုနေရတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိစ္စမှာတော့အနုပညာရှင်တော်တော်များများကတော့ ပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့ ရန်အောင်ကတိတ်ဆိတ်လို့နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်မှာကျင်းပသွားတဲ့ တီဗီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကတော့ ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်နော်.
ဒီနေ့လေးမှာတော့ သရုပ်ဆောင်ရန်အောင်ကတစ်သက်လုံးကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ရန်အောင်ကတစ်သက်လုံးကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများ၊ နာမကျန်းဖြစ်ချိန်မှာဆေးပေးမီးယူပြုပေးသူ၊ချို့တဲ့ချိန်မှာငွေထုတ်ချေးပြီး ကူညီပေးသူ၊ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ကိုယ်နှင့်တစ်သားထဲရှိပေးသူ၊ခက်ခဲနေချိန်မှာနောက်ကျောကနေပံ့ပိုးပေးသူ။
ဘာမျှမရှိချိန်မှာစိတ်မှန်နှလုံးမှန်ဖြင့်မြတ်နိုးသူ၊မသိနားမလည်နေချိန်မှာစိတ်ပါလက်ပါလမ်းညွှန်းပေးသူ၊သေရေးရှင်ရေးတမျှ အခက်အခဲအကြပ်အတည်းဖြစ်ချိန်မှာစွန့်ခွာမသွားဘဲ နှုတ်၏ဆောင်မခြင်းကိုယ်၏ဆောင်မခြင်းများဖြင့် ကူညီဖေးမစောင့်ရှောက်ပေးသူ။ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိသူ၊လူပီသတဲ့သူများအားလုံးကျန်းမာကြပါစေဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ရန်အောင်ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေမြှင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ရန်အောင်ရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားလေးကိုလည်း ဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
ပရိတ္သတ္ေတြၾကား ေဝဖန္မႈေတြျပင္းျပင္းထန္ထန္ျမင့္တတ္ေနတဲ့ ထပ္ဆင့္အကယ္ဒမီရန္ေအာင္ရဲ႕ေက်းဇူးတင္စကားမ်ာ
အကယ္ဒမီဆုမ်ားရွင္ရန္ေအာင္ကေတာ့ အႏုပညာရွင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မသိသူမရွိရေအာင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့မင္းသားတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ေအာင္ကေတာ့ လူႀကီးလူငယ္ခ်စ္ခင္အားေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္သူပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ဇာတ္လမ္းတိုင္းကို အားေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသားရန္ေအာင္ကေတာ့ အႏုပညာဝမ္းစာျပည့္ဝသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဟာသပိုင္းမွာလည္း ကြၽမ္းက်င္သလိုဒရမ္မာပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း ပရိသတ္ေတြငိုရေလာက္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ႏိုင္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ရန္ေအာင္က ဟာသပိုင္းေတြကိုပိုၿပီးအားသန္လာတာေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ႕အသည္းစြဲလည္း ျဖစ္လို႔ေနျပန္ပါတယ္။ မင္းသားရန္ေအာင္က အေပါင္းအသင္းလည္းေျပျပစ္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွာလည္း ခ်စ္ခင္သူေတြေပါမ်ားၿပီး ပရိသတ္ေတြကလည္း အခ်စ္ပိုေနရတဲ့မင္းသားတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အာဏာသိမ္းမႈကိစၥမွာေတာ့အႏုပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔တစ္သားတည္းရပ္တည္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ရန္ေအာင္ကတိတ္ဆိတ္လို႔ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္မွာက်င္းပသြားတဲ့ တီဗီအစီအစဥ္တစ္ခုမွာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုကေတာ့ ေရပန္းစားေနခဲ့ပါတယ္ေနာ္.
ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ေအာင္ကတစ္သက္လုံးေက်းဇူးတင္ထိုက္သူေတြကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းအခုလိုေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ေအာင္ကတစ္သက္လုံးေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္မွာေဆးေပးမီးယူျပဳေပးသူ၊ခ်ိဳ႕တဲ့ခ်ိန္မွာေငြထုတ္ေခ်းၿပီး ကူညီေပးသူ၊ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ႏွင့္တစ္သားထဲရွိေပးသူ၊ခက္ခဲေနခ်ိန္မွာေနာက္ေက်ာကေနပံ့ပိုးေပးသူ။
ဘာမွ်မရွိခ်ိန္မွာစိတ္မွန္ႏွလုံးမွန္ျဖင့္ျမတ္ႏိုးသူ၊မသိနားမလည္ေနခ်ိန္မွာစိတ္ပါလက္ပါလမ္းၫႊန္းေပးသူ၊ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းျဖစ္ခ်ိန္မွာစြန႔္ခြာမသြားဘဲ ႏႈတ္၏ေဆာင္မျခင္းကိုယ္၏ေဆာင္မျခင္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေဖးမေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ။ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိသူ၊လူပီသတဲ့သူမ်ားအားလုံးက်န္းမာၾကပါေစဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ ရန္ေအာင္ေရးသားထားတဲ့ပို႔စ္ေအာက္မွာေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြျမႇင့္တက္ေနခဲ့ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးလည္း ရန္ေအာင္ရဲ႕ ေက်းဇူးတင္စကားေလးကိုလည္း ေဝဖန္ေပးခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္..
Previous Article ၇ ရက် သားသမီးများ အတွက် 2021 ခုနှစ် (11) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
Next Article ပြည်သူများကိုယ့်အားကိုကိုးကြရတော့မည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင် ဆို…